Apple dia namoaka ny beta ampahibemaso voalohany an'ny macOS Sierra 10.12.1 | Avy amin'ny mac aho
Apple dia namoaka ny beta ampahibemaso voalohany an'ny macOS Sierra 10.12.1
Omaly maraina fotsiny dia nahita ireo macOS Sierra 1 beta 10.12.1 fahatongavana ary miaraka aminy dia mihidy amin'ity herinandro ity ny tsingerin'ny fandefasana kinova beta an'ny Apple. Ho fanampin'ity beta ity ho an'ny mpampiasa macOS Sierra, ny beta 1 ho an'ny daholobe dia natomboka ihany koa ho an'ireo mpampiasa rehetra izay mandray anjara amin'ny kinova ho an'ny iOS 10. Ny marina dia nanomboka ny cañera ny herinandro amin'ny resaka fanavaozana ary mifarana mitovy, miaraka amin'ny vaovao betas.
Ny fahatongavan'ity beta vaovao ho an'ny daholobe ity dia manondro fa tsy misy ny olana amin'ny asa ankapobeny ary noho izany dia miasa tanteraka ny manomboka amin'ny endrika beta. Raha iray amin'ireo mpampiasa te handray anjara amin'ny betsa public macOS Sierra ianao, Manoro hevitra izahay ny hampiasa fisarahana ivelan'ny rafitra fiasanao na eo aza ny zava-misy fa tena mizotra tsara hatramin'ny voalohany ny zava-drehetra. Aza adino fa ny rindranasa, fitaovana na fiasa sasany dia mety tsy mifanaraka amin'ny beta. Na ahoana na ahoana, ny rohy hisoratra anarana sy handray ireo kinova ireo alohan'ny hanaovana izany ny ankamaroan'ny mpampiasa. hiala eto isika.
Na izany na tsy izany, ny fanatsarana nampiharina tamin'ity kinova beta vaovao ity izay navoaka ho an'ireo mpamorona sy mpampiasa mandray anjara amin'ny programa beta ho an'ny daholobe, dia tsy manampy vaovao afa-tsy ny fanatsarana ny filaminana, ny fitoniana ary ny fahombiazan'ny rafitra ihany. Etsy ankilany, ireo mpampiasa beta an'ny iOS 10 sy ny iPhone 7 Plus Ho fanampin'ireo fanamboarana bibikely, fitoniana ary maro hafa, dia efa ananan'izy ireo ny fanatsarana ny fakan-tsary izay ahafahan'izy ireo manao an'io sary "bokeh" mahavariana io amin'ny sary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Sierra » Apple dia namoaka ny beta ampahibemaso voalohany an'ny macOS Sierra 10.12.1
Apple Maps dia manolotra pejin-tranonkala ho an'ny daholobe
Fanovana 5 na vaovao ho tonga amin'ny faritra iPad Pro